Mafana ny andro : ireo fitandremana tokony hatao · Aponga
Mafana ny andro : ireo fitandremana tokony hatao
Ao anatin’ny hafanana tanteraka i Madagasikara. Mandefa hafatra ho an’ny mponina ny BNGRC sy ny minisiteran’ny Fahasalamana ho fitondrantena hahafahana misoroka ny loza mety haterak’izany hafanana izany.
Ho an’ny fitafy, tsara ny manao akanjo maivana, malaladalaka ary miloko mazava. Mila misotro rano matetika na tsy mahatsiaro mangetaheta aza hisorohana amin’ny tsy fahampian-drano amin’ny fatana ka hiteraka tsy fahasalamana tampoka eny an-dalana.
Rehefa tsy maintsy mivoaka ny trano, mila manao satroka na mamelatra elo hiarovana amin’ny herin’ny masoandro tsy hivantana amin’ny tarehy sy ny tampon-doha. Lemana na hatao mandomando ny satroka hampangatsiatsiaka ny loha.
Tsy tokony hivezivezy eny ankalamanjana amin’ny fotoana mahamafy ny danik’andro, eo anelanelan’ny amin’ny 12 ora ka hatramin’ny 2 ora antoandro. Raha tsy maintsy hivoaka ny trano, na amin’ny vao maraimbe na rehefa folaka ny andro.
Mila mandro matetika na tobasana rano matetika ny vatana rehefa tena mafana be iny ny andro. Hatao izany na amin’ny ankizy na amin’ny lehibe. Mipetraka amin’ny malomaloka raha azo atao.Tsy misotro zavatra misy alikaola fa mahatonga tsy fahampian-drano.
Sokafana tsara avokoa na ny varavarankely na ny varavarambe hahafahan’ny rivotra mivezivezy ao an-trano. Toraka izany ny any an-tsekoly izay be mpianatra ao anaty efitranon-tsekoly.
Ho an’ny biby fiompy, apetraka amin’ny malomaloka izy ireny ary ampisotroina rano matetika mba tsy ho tratry ny tsy fahampian-drano. Tsy azo atao ny manipitsipy afo na plastika na vera eny amin’ny toerana misy ahitra na ravin-kazo maina fa mety hiteraka firehetan’ny tanety izany.
Fiahiana ny maha olona : mitsidika an’i Madagasikara ny talen’ny OCHA